Dhaawo sawiradda:Munaasibadda Xuska Sannadguurada 70-aad Ee Ciidanka Booliska Soomaaliya Oo Muqdisho Lagu Qabtay | Sagal Radio Services
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, wasiirro ka tirsan dowladda, Taliyeyaasha ciidammada Booliska Soomaaliya, saraakisiha ciidammada Qalabka Sida, masuuliyiin ka socotay Midowga Yurub iyo dowladda Turkiga ayaa ka soo qeyb-galay dabaal deggii ay ciidammada Booliska maanta sameeyeen.
Ciidammada Booliska oo ka kooban dhowr qeybooda ayaa Gaadda Kayaal dheer ku sameeyey Fagaaraha Akadeemiyada General Kaahiye, iyadoo uu Salaan Sharaf uu ka qaadanayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda ahna taliyaha guud ee ciidammada Qalabka Sida Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Ciidammada ka hortagga Rabshada loo diyaariyey ayaa iyana bandhig ay ku muujinayeen sida looga hortago dibed-baxyada rabshadaha wata soo bandhiggay, waxaana Daawanayey madaxweynaha iyo masuuliyiintii kale ee ka soo qeyb-gashay, iyadoo dhinaca kale dabaal degga ay qeyb ka ahaayeen Fardo loo Tababaray ka qeyb-galka Fantasyaha ciidammada.
Gabagabada qeybta koobaad ee dabaal deggana sannad guurada Todobaadtanaad ee Ciidammada Booliska kaddib ayaa masuuliyiin ka Tirsan Ururrada Haweenka Qaranka Soomaaliyeed iyo saraakiil ciidan waxa ay ciidammada ugu hambalyeeyeen sannad guurada todobaadtanaad, waxana u rajeeyeen guur, waxaana saraakiisha hambalyada direysa ka mid ah taliyaha kooxda Heegan ee Ciidammada Booliska Soomaaliyeed Aadan Cumar Axmed “Aadan Biid”.
Ciidammada Booliska Soomaaliya ayaa la aas aasay sannadkii 1943-dii, waxaa ciidammada ugu faca weyn guud ahaan ciidammada Qalabka Sida, waxa ay soo mareen muddo labaatan sanno oo bur-bur ah hasa yeeshee, waayan ayeey la soo baxeen isbaddello waa weyn oo dhinaca dhismaha ah, waxa ayna habeen iyo maalin u taagan yihiin ilaalinta amniga iyo Sharciga.
Tags Booliska munaasabada Soomaaliya